iPad Pro အသစ်က Computer တစ်လုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့ Apple
3 Nov 2018 . 4:44 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ကပဲ Apple က iPad Pro အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ iPad Pro တွေကို အခုတော့ အရင်ကထက် အများကြီးပိုကောင်းလာအောင် Apple က လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
iPad အသစ်မှာတော့ လက်ရှိ Apple Product အသစ်တော်တော်များများလိုပဲ Rounded Corner တွေပါတဲ့ Full Screen Design နဲ့ Display Design တွေကို ပြောင်းသုံးပေးလာပါတယ်။ Body ကိုလည်း အရင်က iPad တွေလို လုံးနေအောင် လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘဲ လေးထောင့်ဆန်ဆန် အပြားတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတဲ့အပြင် ပိုပြီး ပါးလာပါပြီ။ Design ပိုင်းမှာတော့ iPad သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံး iPad အဖြစ် iPad Pro က စာရင်းဝင်သွားပါပြီ။
iPad Pro အသစ်တွေကို 12.9 Inch နဲ့ 11 Inch ဆိုပြီး Display Size နှစ်မျိုးနဲ့ ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ iPad Pro Size အသေးမှာ 9.7 Inch နဲ့ 10.2 Inch ဆိုပြီး နှစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ 11 Inch က အသေးဆုံး iPad Pro ဖြစ်လာပါပြီ။ 12.9 Inch iPad Pro ကိုလည်း Body Size ပိုသေးအောင်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် အရင်က 12.9 Inch iPad Pro ထက် အရွယ်က ပိုသေးသွားပါတယ်။
အခုလို Design ကိုရဖို့အတွက်တော့ Apple ရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ Home Button ကို ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်။ Home Button မပါတော့တဲ့အတွက် Touch ID ကိုလည်း iPhone X မှာစပြီးတွေ့ရတဲ့ Face ID နဲ့ အစားထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ Face ID ကိုလည်း iPad ကို ဘယ်လိုကိုင်ထားထား သုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာကြောင့် Unlock လုပ်ဖို့အတွက် Screen ကြီးကို အတည့်ဖြစ်အောင် လှည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ Display ရဲ့ အပေါ်နဲ့အောက်ဘောင်တွေက အရင်ကထက် ပိုသေးသွားလို့ ကြည့်ရတာလည်း ပိုလှသွားသလို Body Size လည်း သေးသွားစေပါတယ်။ Home Button အတွက်တော့ Gesture တွေနဲ့ အစားထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။
Display တွေကိုတော့ 11 Inch မှာ 2388 x 1668 Resolution နဲ့ 12.9 Inch မှာ 2732 x 2048 Resolution အထိရှိပါတယ်။ Display နှစ်ခုလုံးကတော့ LCD Display တွေဖြစ်ပြီး Apple က Liquid Retina Display လို့ပဲ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Display တွေမှာတော့ အရင်ကတွေ့နေကျအတိုင်း ProMotion (120Hz Refresh Rate) ၊ P3 Colour Gamut ၊ True Tone ၊ 600 Nits Brightness တွေ ရနေဦးမှာပါ။
လေးထောင့်ဆန်ဆန် ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင်က iPad Pro တွေရဲ့ ဘေးဖက်မှာပါတဲ့ Smart Connector ကို နောက်ကျောဖက်ပို့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ Mic တစ်ခုကို တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ဘောင်မှာတော့ Magnetic Connector အသစ်ထပ်ပါလာပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Apple Pencil အသစ်ကို အားသွင်းပေးဖို့အတွက်ပါ။ အပေါ်ဖက်မှာတော့ Mic ၃ ခုအထိ ထပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေါ်နဲ့အောက်ဘောင်တွေမှာရှိတဲ့ Speaker ပေါက်တွေကိုလည်း အရင်ကထက် ပိုများအောင် ဖောက်ပေးထားပါတယ်။ အောက်ဖက်မှာတော့ Lightning Connector အစား USB-C အပေါက်ကို ပြောင်းပြီးတပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
iPad Pro အသစ်တွေမှာတော့ Apple A12X Bionic Chip တွေကို သုံးပေးထားပါတယ်။ Storage တွေအနေနဲ့တော့ 64GB ၊ 256GB ၊ 512GB နဲ့ 1TB ဆိုပြီး ၄ မျိုးအထိ ရွေးလို့ရလာပါပြီ။ RAM ကိုတော့ Apple က ထုတ်မပြောတတ်ပေမယ့် iPad Pro အသစ်တွေမှာ RAM 4GB ပါပြီး 1TB Storage ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ RAM 6GB အထိပါဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ iOS Device တွေထဲမှာ 1TB Storage နဲ့ထုတ်ပေးတာ ဒါပထမဦးဆုံးပါ။ Battery Charging အတွက်လည်း 18W USB-C Adpater ပါဝင်မှာဖြစ်လို့ Fast Charging အတွက်လည်း အဆင်ပြေမှာပါ။
နောက်ကျောဖက်မှာ 12MP f/1.8 Aperture ရှိတဲ့ Camera ကိုတပ်ပေးပြီး လက်ရှိ iPhone XS တွေရဲ့ Camera တွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ OIS မပါပေမယ့် Smart HDR နဲ့ Auto Imgae Stabilization တွေကိုတော့ သုံးလို့ရပါတယ်။ Face ID အတွက် 7MP f/2.2 ရှိတဲ့ True Depth Camera System ပါလာတာကြောင့် Portrait Selfie ၊ Animoji နဲ့ Memoji တွေကို သုံးလို့ရလာပါပြီ။
Smart Keyboard Folio & New Apple Pencil
iPad Pro အသစ်တွေအတွက် Smart Keyboard အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Keyboard အသစ်ကတော့ နောက်ကျောဖက်က Smart Connector ကိုသုံးပြီး iPad Pro နဲ့ တွဲလို့ရမှာပါ။ Folio Keyboard ကတော့ iPad အတွက် Cover အဖြစ်လည်းသုံးလို့ရတာကြောင့် သယ်သွားတဲ့အခါ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Apple Pencil အသစ်ကတော့ Design ပြောင်းသွားပါပြီ။ အားသွင်းဖို့အတွက်ကိုတော့ iPad Pro ရဲ့ ဘေးဘောင်မှာရှိတဲ့ Magnetic Connector ကို ကပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ iPad Pro ကို အားသွင်းနေချိန်မှာလည်း Apple Pencil ကို တစ်ခါတည်း အားသွင်းထားလို့ရပါသေးတယ်။ Apple Pencil ကို အခုလို အားသွင်းလို့ရအောင်အတွက်တော့ ဘေးဖက် မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို အပြားလုပ်ပေးထားတာကြောင့် လက်ထဲမှာ ကိုင်တဲ့အခါလည်း ခဲတံအစစ်လို ပိုပြီးသဘာဝကျလာမှာပါ။ အရင် Apple Pencil အဟောင်းတွေကိုတော့ အခု iPad Pro အသစ်တွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
iPad Pro ကို Smart Keyboard နဲ့ Apple Pencil တွေကို တွဲတဲ့အခါ အဆင်ပြေပြီး အမြဲတည့်နေဖို့အတွက် အထဲမှာ သံလိုက်ပေါင်း အခု ၁၂၀ တိတိကို ထည့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
Why iPad Pro isacomputer.
Apple က iPad Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီး What isacomputer? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကို YouTube မှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကိုတော့ အခုနှစ်မှာထုတ်ပြတဲ့ iPad Pro အသစ်တွေက ဖြေပေးလိုက်ပါပြီ။
iPad တွေက Computer တွေပါပဲ။ တခြား Computer တွေနဲ့မတူတဲ့ Computer တွေဖြစ်နေတာက iPad တွေရဲ့ ထူးခြားချက်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ iOS အတွက် အထူးလုပ်ပေးထားတဲ့ Hardware တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကြောင့် Computer တွေလို သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကို Apple က ပြချင်တာပါ။ Keyboard နဲ့ Apple Pencil က iPad တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးနေသလိုပါပဲ။
Creator အမျိုးမျိုး အတွက်တော့ iPad တွေက Computer တွေဖြစ်နိုင်သလို ပုံဆွဲတဲ့ Canvas တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကလူတိုင်းအတွက် iPad တွေက တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အားဖြည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် Powerful ဖြစ်တဲ့ Portable Computer အဖြစ် Apple က ပြောချင်တာပါ။ သင်ရော iPad တွေကိုသုံးပြီး ဘာတွေဖန်တီးဖူးသလဲ။
iPad Pro အသဈက Computer တဈလုံးလို့ပွောလိုကျတဲ့ Apple
ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာ ၃၀ ရကျနကေ့ပဲ Apple က iPad Pro အသဈတှကေို မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ အရငျကတညျးက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ iPad Pro တှကေို အခုတော့ အရငျကထကျ အမြားကွီးပိုကောငျးလာအောငျ Apple က လုပျပွနိုငျခဲ့ပါပွီ။
iPad အသဈမှာတော့ လကျရှိ Apple Product အသဈတျောတျောမြားမြားလိုပဲ Rounded Corner တှပေါတဲ့ Full Screen Design နဲ့ Display Design တှကေို ပွောငျးသုံးပေးလာပါတယျ။ Body ကိုလညျး အရငျက iPad တှလေို လုံးနအေောငျ လုပျပေးထားတာမဟုတျဘဲ လေးထောငျ့ဆနျဆနျ အပွားတဈခုဖွဈအောငျ လုပျပေးထားတဲ့အပွငျ ပိုပွီး ပါးလာပါပွီ။ Design ပိုငျးမှာတော့ iPad သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ ပွောငျးလဲမှုအရှိဆုံး iPad အဖွဈ iPad Pro က စာရငျးဝငျသှားပါပွီ။
iPad Pro အသဈတှကေို 12.9 Inch နဲ့ 11 Inch ဆိုပွီး Display Size နှဈမြိုးနဲ့ ထုတျပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ အရငျကတော့ iPad Pro Size အသေးမှာ 9.7 Inch နဲ့ 10.2 Inch ဆိုပွီး နှဈခုရှိခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ 11 Inch က အသေးဆုံး iPad Pro ဖွဈလာပါပွီ။ 12.9 Inch iPad Pro ကိုလညျး Body Size ပိုသေးအောငျလုပျပေးထားတာကွောငျ့ အရငျက 12.9 Inch iPad Pro ထကျ အရှယျက ပိုသေးသှားပါတယျ။
အခုလို Design ကိုရဖို့အတှကျတော့ Apple ရဲ့ သင်ျကတေတဈခုလိုဖွဈနတေဲ့ Home Button ကို ဖွုတျလိုကျရပါတယျ။ Home Button မပါတော့တဲ့အတှကျ Touch ID ကိုလညျး iPhone X မှာစပွီးတှရေ့တဲ့ Face ID နဲ့ အစားထိုးပေးလိုကျပါတယျ။ Face ID ကိုလညျး iPad ကို ဘယျလိုကိုငျထားထား သုံးလို့ရအောငျ လုပျပေးထားတာကွောငျ့ Unlock လုပျဖို့အတှကျ Screen ကွီးကို အတညျ့ဖွဈအောငျ လှညျ့နစေရာမလိုပါဘူး။ Display ရဲ့ အပျေါနဲ့အောကျဘောငျတှကေ အရငျကထကျ ပိုသေးသှားလို့ ကွညျ့ရတာလညျး ပိုလှသှားသလို Body Size လညျး သေးသှားစပေါတယျ။ Home Button အတှကျတော့ Gesture တှနေဲ့ အစားထိုးပေးလိုကျပါတယျ။
Display တှကေိုတော့ 11 Inch မှာ 2388 x 1668 Resolution နဲ့ 12.9 Inch မှာ 2732 x 2048 Resolution အထိရှိပါတယျ။ Display နှဈခုလုံးကတော့ LCD Display တှဖွေဈပွီး Apple က Liquid Retina Display လို့ပဲ နာမညျပေးထားပါတယျ။ Display တှမှောတော့ အရငျကတှနေ့ကေအြတိုငျး ProMotion (120Hz Refresh Rate) ၊ P3 Colour Gamut ၊ True Tone ၊ 600 Nits Brightness တှေ ရနဦေးမှာပါ။
လေးထောငျ့ဆနျဆနျ ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ပွောငျးလဲမှုတှေ အမြားကွီးဖွဈသှားပါတယျ။ အရငျက iPad Pro တှရေဲ့ ဘေးဖကျမှာပါတဲ့ Smart Connector ကို နောကျကြောဖကျပို့လိုကျရပါတယျ။ အဲ့ဒီနရောမှာတော့ Mic တဈခုကို တပျပေးလိုကျပါတယျ။ တဈဖကျဘောငျမှာတော့ Magnetic Connector အသဈထပျပါလာပါတယျ။ အဲ့တာကတော့ Apple Pencil အသဈကို အားသှငျးပေးဖို့အတှကျပါ။ အပျေါဖကျမှာတော့ Mic ၃ ခုအထိ ထပျပွီးထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ ပျေါနဲ့အောကျဘောငျတှမှောရှိတဲ့ Speaker ပေါကျတှကေိုလညျး အရငျကထကျ ပိုမြားအောငျ ဖောကျပေးထားပါတယျ။ အောကျဖကျမှာတော့ Lightning Connector အစား USB-C အပေါကျကို ပွောငျးပွီးတပျပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။
iPad Pro အသဈတှမှောတော့ Apple A12X Bionic Chip တှကေို သုံးပေးထားပါတယျ။ Storage တှအေနနေဲ့တော့ 64GB ၊ 256GB ၊ 512GB နဲ့ 1TB ဆိုပွီး ၄ မြိုးအထိ ရှေးလို့ရလာပါပွီ။ RAM ကိုတော့ Apple က ထုတျမပွောတတျပမေယျ့ iPad Pro အသဈတှမှော RAM 4GB ပါပွီး 1TB Storage ကိုဝယျမယျဆိုရငျတော့ RAM 6GB အထိပါဝငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ iOS Device တှထေဲမှာ 1TB Storage နဲ့ထုတျပေးတာ ဒါပထမဦးဆုံးပါ။ Battery Charging အတှကျလညျး 18W USB-C Adpater ပါဝငျမှာဖွဈလို့ Fast Charging အတှကျလညျး အဆငျပွမှောပါ။
နောကျကြောဖကျမှာ 12MP f/1.8 Aperture ရှိတဲ့ Camera ကိုတပျပေးပွီး လကျရှိ iPhone XS တှရေဲ့ Camera တှနေဲ့ အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။ OIS မပါပမေယျ့ Smart HDR နဲ့ Auto Imgae Stabilization တှကေိုတော့ သုံးလို့ရပါတယျ။ Face ID အတှကျ 7MP f/2.2 ရှိတဲ့ True Depth Camera System ပါလာတာကွောငျ့ Portrait Selfie ၊ Animoji နဲ့ Memoji တှကေို သုံးလို့ရလာပါပွီ။
iPad Pro အသဈတှအေတှကျ Smart Keyboard အသဈကို မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Keyboard အသဈကတော့ နောကျကြောဖကျက Smart Connector ကိုသုံးပွီး iPad Pro နဲ့ တှဲလို့ရမှာပါ။ Folio Keyboard ကတော့ iPad အတှကျ Cover အဖွဈလညျးသုံးလို့ရတာကွောငျ့ သယျသှားတဲ့အခါ အဆငျပွစေပေါတယျ။
Apple Pencil အသဈကတော့ Design ပွောငျးသှားပါပွီ။ အားသှငျးဖို့အတှကျကိုတော့ iPad Pro ရဲ့ ဘေးဘောငျမှာရှိတဲ့ Magnetic Connector ကို ကပျလိုကျရငျရပါပွီ။ iPad Pro ကို အားသှငျးနခြေိနျမှာလညျး Apple Pencil ကို တဈခါတညျး အားသှငျးထားလို့ရပါသေးတယျ။ Apple Pencil ကို အခုလို အားသှငျးလို့ရအောငျအတှကျတော့ ဘေးဖကျ မကျြနှာပွငျတဈခုကို အပွားလုပျပေးထားတာကွောငျ့ လကျထဲမှာ ကိုငျတဲ့အခါလညျး ခဲတံအစဈလို ပိုပွီးသဘာဝကလြာမှာပါ။ အရငျ Apple Pencil အဟောငျးတှကေိုတော့ အခု iPad Pro အသဈတှနေဲ့ တှဲသုံးလို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။
iPad Pro ကို Smart Keyboard နဲ့ Apple Pencil တှကေို တှဲတဲ့အခါ အဆငျပွပွေီး အမွဲတညျ့နဖေို့အတှကျ အထဲမှာ သံလိုကျပေါငျး အခု ၁၂၀ တိတိကို ထညျ့ပေးထားတယျလို့သိရပါတယျ။
Apple က iPad Pro နဲ့ပတျသကျပွီး What isacomputer? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးတဈခုနဲ့ ကွျောငွာတဈခုကို YouTube မှာ တငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးကိုတော့ အခုနှဈမှာထုတျပွတဲ့ iPad Pro အသဈတှကေ ဖွပေေးလိုကျပါပွီ။
iPad တှကေ Computer တှပေါပဲ။ တခွား Computer တှနေဲ့မတူတဲ့ Computer တှဖွေဈနတောက iPad တှရေဲ့ ထူးခွားခကျြလိုဖွဈနပေါတယျ။ iOS အတှကျ အထူးလုပျပေးထားတဲ့ Hardware တဈခုလိုဖွဈနတောကွောငျ့ Computer တှလေို သုံးနိုငျတယျဆိုတဲ့အတှေးအချေါကို Apple က ပွခငျြတာပါ။ Keyboard နဲ့ Apple Pencil က iPad တှကေို ဘယျလိုသုံးရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖွတျပေးနသေလိုပါပဲ။
Creator အမြိုးမြိုး အတှကျတော့ iPad တှကေ Computer တှဖွေဈနိုငျသလို ပုံဆှဲတဲ့ Canvas တှလေညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ နယျပယျအမြိုးမြိုးကလူတိုငျးအတှကျ iPad တှကေ တဈထောငျ့တဈနရောကနေ အားဖွညျ့ပေးနိုငျတာကွောငျ့ Powerful ဖွဈတဲ့ Portable Computer အဖွဈ Apple က ပွောခငျြတာပါ။ သငျရော iPad တှကေိုသုံးပွီး ဘာတှဖေနျတီးဖူးသလဲ။